အလွမ်းပြေ – PoemsCorner
ငါတို့တွေတွေ့ဆုံမှုက ..အဲ့ဒီစကားတွေကို ပြောပြဖို့စွံ့အ,ခဲ့စေတယ်….
ကောင်မလေးငါဘယ်လောက်တောင်ရူးသွပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမင်းမသိခဲ့ဘူးနော်….ဟုတ်တယ်..မင်းအသံလေး မကြားရခင် ..မင်းဓါတ်ပုံလေးမတွေ့ရခင်မှာ ငါမင်းကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်မင်းယုံကြည်နိုင်ပါ့မလား……ဟုတ်တယ်ငါ့ကိုယ်ငါတောင်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူုး(မင်းမယုံတာလဲအပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး
ငါမင်းကိုချစ်တယ်ကောင်မလေး..ငါ့အကောင့်ထဲမှာ မင်းမီးစိမ်းလေးလင်နေပြီဆိုငါဘယ်လောက်တောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရလဲဆိုတာ မင်းမသိခဲ့ဘူး…ပြီးတော့ မင်းမရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုငါဘယ်လောက်တောင် ၀မ်းနည်းခဲ့ရလဲ..မင်းရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုငါဘယ်လောက်တောင်မျှော်လင့်ခဲ့ရလဲမင်းမသိခဲ့ဘူးးးး….အဲ့ဒီမသိခြင်းများစွားနဲ့ပဲ ငါ့နှလုံးသားကအချစ်တွေကို မင်းမသိခဲ့ဘူးနော်…အစ်ကိုတဲ့ ..မင်းခေါ်လိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကစာကြောင်းအဖြစ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ ငါ့နားနားကပ်ပြောနေသလိုငါကြားနေရတယ် …ငါရင်ခုန်မိတယ်ကွာ…..အချစ်ဆိုတာ မြင်ရမှ..အသံလေးကြားနေရမှ ချစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါကိုငါငြင်းတယ်…….ဘာကြောင့်လဲသိလား မင်းကိုငါ…စာလေးတွေနဲ့စကားပြောနေရင်းရင်ခုန်မိခဲ့တာပါ…“
အဲ့ဒီလို..ငါရဲ့အချစ်တွေကိုမင်းငြင်းဆန်ခဲ့တယ်နော် ………ဟုတ်ပါတယ် ငါလဲကြိုတွေးပြီးသားပါ …မင်းငြင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာလေ…
လူတိုင်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရတစ်လုံးတည်းနဲ့ငါ့ရဲ့အချစ်တွေကို မင်းခြေမွပစ်ခဲ့တယ်နော်….ဒီလိုနဲ့မင်း လပေါင်းများစွာ….ရက်ပေါင်းများစွာ..နာရီစက္ကန့်ပေါင်းများစွာ…မင်းငါ့အကောင့်လေးထဲမှာ အစိမ်းရောင်မသန်းတော့ဘူးနော်..
ငါဝမ်းနည်းမိတယ်ကောင်မလေး ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမျက်ရည်မကျရဘူးဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကို …ငါကန်ထုတ်ပစ်တယ်..ငါငိုတယ် မျက်ရည်တွေတော့မရွှဲခဲ့ဘူးပေါ့….အဲ့ဒီနေ့ ကစလို့ငါ့ရင်ထဲမှာ အလွမ်းဆိုတာရယ်မင်းရယ်ပြီးတော့ကျောက်ဆည်မြို့လေးရယ်ကလွဲပြီး ဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်ငါရူးသွပ်ခဲ့ရတယ်…
21ရာစုရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံး အရူးဘွဲ့ကို ငါခံယူခဲ့တယ်..ကောင်မလေး…..ငါ့ကဗျာတွေငါ့စာတွေမှာ မင်းအကြောင်းတွေ ထပ်ထပ်ခါခါရေးခဲ့တာတောင် ..ငါရိုးအီမသွားခဲ့ဘူး……..ဒါပေမယ့်…အခုငါပျော်တယ်..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မင်းအကောင့်လေးငါ့ဆီမှာ စိမ်းနေပြန်ပြီလေ……….ငါ..ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်လောက်နောက်ထပ်ပြောမိခဲ့ရင် …အရင်လိုပဲ လပေါင်းများစွာ ငါလွမ်းနေရဦးမှာလား………..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ………….ငါမင်းကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
In: စကားပြေ Posted By: D26 Date: Mar 11, 2012
အလွမ်းကြောင့် ဖြစ်သော စစ်ပွဲများ
Leave comment9Comments & 452 views
By: kantkawmg at Mar 12, 2012
အော် ဒါလည်းရူးသွပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါလားကွယ် ~~
By: X - ray at Mar 13, 2012
By: ei lay at Mar 13, 2012
အားပါး.. ခံစားချက်တွေ ထပ်တူ ကျနေပါလား.. ကျွန်တော်ရင်ထဲကို ၀င်ပြီး ကြည့်နေသလိုကို မြင်နေရတာ…..
By: ko thu at Mar 19, 2012
haha wonderful dreaming
By: cynthia at Mar 19, 2012
whenever i read this lovely poem..
u feel sad,
By: ei lay at Mar 19, 2012
ဟုတ်ကဲ့ပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ သူကို သတိရလို့ရေးခဲ့မိတာပါ…
မအိလေးရေ ကျေးဇူးပါဗျာနော် ကျွန်တော့အတွက် အမြဲတမ်းကွန်မန့်တွေ ပေးနေတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာ….
By: D26 at Mar 20, 2012
By: ei lay at Aug 1, 2012